Ixesha kunye nabahlobo 25
Kwa la matye kuthiwa ngabantu abohlukeneyo yeyabakwiinyanga ezahlukileyo, kwaye amandla athile kuthiwa avela kumatye athile xa enxibe enyangeni okanye enyakeni abo bantu bathi mabanxibe. Zonke ezi zimvo zahlukeneyo azinakuba yinyani, kwaye uninzi lwazo lunokwenzeka ikakhulu ngenxa yokufenda. Kodwa ubumnandi kukusebenza okungaqhelekanga kwengqondo okanye ukubonakaliswa okugqwethekileyo kwengcinga; lo gama, ukucinga kungumfanekiso owenza okanye ukwakha ubuhlakani bengqondo. Ngendlela efanayo ukuba unobangela wokucalucalulwa kwembonakalo yento yinto ngokwayo, kungangathi ukuzingcola okuninzi malunga nokulunga kwamatye kubangelwe kukulunga kumatye ngokwawo nakulwazi olwalukho malunga namandla amatshe , kodwa apho ulwazi olelahlekileyo luhleli luthando kuphela, okanye ukusebenza okungaqhelekanga kwengqondo, njengomboniso wolwazi lwangaphambili olugcinwe kwizithethe zamadoda. Zonke izinto ngamaziko apho amandla endalo enza khona. Ezinye izinto zibonelela ngamaziko angenamandla kangako ukuba amandla enze ngaphandle kwezinye izinto. Oku kungenxa yolungiselelo lwamasuntswana eento ezahlukileyo ngokobume obuthile. Isinyithi esilungiselelwe kwaye senziwe kwi-wire siya kubonelela ngomgca apho umbane unokuqhutywa ukuya kwindawo enikezelweyo. Umbane awuzukuhamba ngentambo yesilika, nangona uya kuhamba ngecingo yobhedu. Ngendlela efanayo ubhedu luphakathi okanye luqhuba umbane, ngoko ke amatye anokuba ngamaziko apho amandla athile asebenza khona, kwaye njengokuba nobhedu ngumqhubi wombane ongcono kunezinye izinyithi, ezinje nge-zinc okanye ilitha, ke amatye athile abhetele amaziko emikhosi yawo ehambelana namanye amatye. Eli litye lisulungekileyo kungcono njengeziko lamandla.
Inyanga nganye izisa impembelelo ethile yokuthwala emhlabeni nazo zonke izinto ezisemhlabeni, kwaye, ukuba amatye aneenqobo zawo ezifanelekileyo njengamaziko okunyanzelwa, kuya kuba sengqiqweni ukucinga ukuba amatye athile aza kuba namandla ngakumbi njengamaziko okunyanzelwa, Ngexesha apho impembelelo yenyanga yayiyeyona inamandla. Akukho ngqiqweni ukucinga ukuba bekukho ulwazi lwamaxesha apho amatye anezinto ezithile ezithile kwaye ngenxa yoku kwabo bantu bakudala ababekwazi babela amatye kwiinyanga zabo ezifanelekileyo. Ukuncamathela kulo naliphi na ixabiso elithile kumatye aloncedo koku okanye kula mntu unokufumana ulwazi lakhe kwincwadi ye-almanac okanye yencwadi enethamsanqa okanye umntu othile onolwazi oluncinci njengaye. Ukuba umntu uziva ethanda ilitye ngokwakhe, ngaphandle kwexabiso lentengiso, elo litye linokuba namandla kuye okanye alenzele lona. Kodwa akunamsebenzi kwaye kunokuba yingozi ukunamathela ubuhle obunamatye okanye amatye anqabile ukuba ngamatye kwiinyanga ezithile, kuba oku kudala umkhwa kulowo mntu ukuxhomekeka kwinto engaphaya kovuyo ukumnceda kwinto afanele ukuba akwazi ukuzenzela yona . Ukwenza inkanuko kwaye kungabikho sizathu sivakalayo sokukholelwa kuyenzakalisa emntwini kunokuba kube luncedo, kuba kuyayiphazamisa ingqondo, kuyibeka kwizinto ezinobunewunewu, kubangela ukuba soyike ukuba isuka phi ifuna ukhuseleko, kwaye ibenza baxhomekeke kwizinto eziphuma kwamanye. kunokuba uzenzele yona yonke imeko kaxakeka.
Lonke ilitye lixabisekileyo ngaphandle kwexabiso lorhwebo, kodwa ngendlela efanayo ayinguye wonke umntu olaziyo ixabiso layo lezorhwebo ngoko ayinguye wonke umntu olaziyo ixabiso lelinye ngaphandle kwexabiso lemali. Umntu ongalaziyo ixabiso ledayimani engacocekanga unokuyidlula ngendlela ebeya kwenza ngayo ilitye eliqhelekileyo. Kodwa i-encoisseur eyazi ixabiso layo iya kuyigcina, iyinqumle ngendlela yokubonisa ubuhle bayo, emva koko bayinike isicwangciso esifanelekileyo.
Ixabiso lelitye ngokwalo lixhomekeke ekubeni liziko elilungileyo lokutsala kwezinto ezithile okanye amandla kunye nokusasazwa kwezi. Amatye ahlukeneyo atsalela amandla ahlukeneyo. Ayisiyo yonke imikhosi eluncedo kubantu abafanayo. Amandla athile anceda abanye aze enzakalise abanye. Ilitye eliza kutsala amandla athile linganceda elinye kwaye lonzakalise elinye. Umntu kufuneka azi okulungele yena, kunye nokwazi ixabiso lelitye elinye njengoko lahlulwe kwabanye ngaphambi kokuba athathe isigqibo sobulumko ukuba leliphi na ilitye elifanelekileyo kuye. Akukho ngqiqweni kwaphela ukucinga ukuba amatye anexabiso elithile ngaphandle kwexabiso lemali kunoko kucingelwa ukuba into ebizwa ngokuba yelitye lesode linelinye ixabiso kunexabiso elifanelekileyo emalini Izinto ezisebenzayo kuzo. Ke umazibuthe unamandla omazibuthe obusebenza kuwo, kodwa intsimbi ethambileyo ayinasidima kwaye akukho mandla enza ngayo. Amatye ngamaziko amandla asebenzayo awanakutshintshwa ngokuxabisekileyo; kodwa amatye angalunganga angahlawuliswa ngabantu kwaye enze amaziko ukuba enze into, ngendlela efanayo ukuba intsimbi ethambileyo inokubanjiswa ngumazibuthe aze wona abe yimagnethi amatye athi, njengombane, ngamaziko apho elinye okanye ngaphezulu Amandla omkhosi yenye yezo zinto zilungiselelwe yindalo okanye ezinikezwe amandla okanye zidityaniswe namandla ngabantu abathile. Abo banxiba amatye angamaziko anamandla banokutsala amandla abo, njengoko intonga yombane inokutsala umbane. Ngaphandle kolwazi lwamatye anjalo kunye neenqobo zawo ezifanelekileyo, ukuzama ukusebenzisa amatye ngale njongo kuya kukhokelela kuphela kukudideka kwengcinga kunye nokukholelwa kwindumasi. Akukho sizathu sincinci sokwenza ukuthanda kwamatye ngamatye okanye nantoni na eyenye ngeenjongo zobugqi, ngaphandle kokuba umntu uyazi imithetho elawula into eza kusetyenziswa kunye nohlobo lomntu lowo okanye imikhosi enxulumene noku kusetyenziswa okanye ukusetyenziswa kwayo. Eyona ndlela ingcono ngokubhekisele kuyo nayiphi na into engaziwayo kukugcina liso livulekile kunye nengqondo kwaye ulungele ukwamkela nantoni na ebonakala inengqondo malunga nale nto, kodwa ukwala ukufumana enye into.